Izindaba - I-Xieyanshi Abrasives Isebenzisana NeComac!
Siyakuhalalisela ngalokhu kubambisana. Ngemuva kokuxoxisana isikhathi eside nokuhlolwa, iShanghai Xieyanshi Abrasives ekugcineni yadlula i-COMAC'S (ICommercial Aircraft Corporation of China Ltd) ihlola ngokuqinile futhi iqinisekise, iba ngomunye wabahlinzeki abathembekile. Kholwa ukuthi iXIEYANSHI izoba nokubambisana okujulile nabo e-abrasives-A720T, B322, L911 njll.
UMnu Chen, umongameli we-Xieyanshi abrasives, usanda kusayina inkontileka ne-COMAC e-CIIE (tHE 3RD China International Import Expo)
(UMnu Chen, uhleli eduze kwale ntokazi ngombala opinki.)
ICommercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC) isebenza njengeyona moto enkulu ekusebenziseni izinhlelo ezinkulu zezindiza zabagibeli eChina. Kuphinde kwagunyazwa ngokuhlela okuphelele kokuthuthukisa ama-trunk liner nezinhlelo ze-jet zesifunda kanye nokubona ukwenziwa kwezimboni zezindiza zomphakathi eChina. I-COMAC ibandakanyeka ocwaningweni, ekwenziweni nasekuhlolweni kwezindiza ezindizeni zomphakathi nemikhiqizo ehlobene nayo, kanye nokumaketha, ukusevisa, ukuqashisa nokusebenza kwezindiza zomphakathi.
AbakwaShanghai xieyanshi Abraisves Co Ltd (XYS) bangabakhiqizi abangochwepheshe bemikhiqizo, imikhiqizo isetshenziswa kakhulu ku-Automotive, Airplane, Woodworking ... ikhwalithi nezinsizakalo kuhlala kuza kuqala.
Yamukela noma yikuphi ukubuza noma amasampula okucela kuwe. Pls zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi uma ufuna ukwazi kabanzi ngemikhiqizo yethu.